Rasmi: 2.0 iyo sabtigiisa labaad ganacsiga uu sameeyay wa SUPER HIT qaybtiisa Af Hindiga – Filimside.net
Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa xaqiijisay in filimka 2.0 SUPER HIT yahay qaybtiisa Af Hindiga lagu daawanayo madaama 9.25 Crore (Trade Figure) uu keenay sabtigiisa labaad taasi oo ka dhigan mudo 10-maalmood ah inuu filimkan weyn soo xareeyay 152.50 Crore (Trade Figure) qaybtiisa Af Hindiga lagu daawanayo.
2.0 sare u kac 60% ayuu sameeyay sabtigiisa labaad taasi oo ka dhigan in mashruucaan qoysaska siweyn u daawanayaan sidoo kalena maanta oo Axad ah ganacsigiisa 10 Crore sare u dhaafi doono madaama dadka hawlaha ka nasanayaan.
Haddii filimka 2.0 luqado kale lagu daawan laheyn oo kaliya Af Hindi looga daawan daawan lahaa dhamaan gobolada gudaha Hindiya ganacsigiisa mudo 10-maalmood ah 165 Crore ayuu gaari lahaa balse haatan ganacsigiisa waa mid kala qeybsan madaama luqado kala duwan lagu daawanayo.
Waa hubaal in in 2.0 ganacsigiisa 190 Crore gaari doono qaybta Af Hindiga lagu daawanayo balse inuu 200 Crore waxay kaga xirnaan doontaa hadba sida uu isku celiyo todobaadkiisa sedexaad marka uu guda galo.
Fadlan hoos kaga bogo filimka 2.0 iyo ganacsigiisa mudo 10-maalmood ah qaybta Af Hindiga lagu daawanayo soona daabacday shabakada BOI:
Khamiis Labaad-7.75 Crore
Todobaadka kowaad – 137.50 Crore
Jimco labaad – 6 Crore
Sabti labaad – 9.25 Crore
Wadarta Guud: 152.50 Crore (Trade Figure)
F.G: Maanta gelinka dambe ayay shabakada BOI soo gudbin doontaa 2.0 iyo ganacsigiisa guud gudaha Hindiya dhamaan luqadaha kala duwan lagu daawanayo.